I-Russian steaks "atomataos" | Ukupheka kweKhitshi
I-Russian steaks «atomataos»
UHana mitchell | | Ukupheka kwenyama, I-Tapas kunye ne-skewers
Ukuthatha inyani yokuba uninzi lwenu lusekhefini, namhlanje ndikuzisela isisombululo esihle kuhambo lwakho oluya elunxwemeni, emaphandleni okanye ezintabeni. Ezo ntsuku ze-tupperware, usapho kunye nokuphumla okuhlala kubandakanya i-potato omelette, iisendwitshi kunye ne-steaks ezinesonka, zinokujikeleza oku kubamnandi kwaye (ukuba kutyiwe kubanda) iresiphi ehlaziyayo I-Russian steaks «atomataos».
Abo balandela le bhlogi ngokuqinisekileyo bayazi ukuba ndihlala ndizama ngobuqili ukugubungela iiresiphi zesiko. Eli xesha belingazukuba lincinci. Fumanisa ukuba yeyiphi indima edlalwa yijinja kunye nebell pepper kule recipe.
Le recipe ye-Russian steaks «atomataos» isitya esingenakuthobeka kodwa rhoqo
I-500 g ye-veal okanye inyama exubeneyo
50 g isonka esomileyo
40 g itswele
2 cm ingcambu yejinja (endaweni yokusebenzisa igalikhi)
2 amagqabi ekhaphetshu
1 inkonkxa yetamatato etyumkileyo
2 iisupuni zeswekile emdaka.
Isonka sibeka isitya esinamanzi anetyuwa. Siyakhupha kwaye sigcine.
Sika itswele kakuhle kakhulu, uxobule kwaye usike ijinja kwaye uhlambe kwaye usike amagqabi amabini ekhaphetshu (sigcina izithako ezi-2 ngokwahlukeneyo).
Kwisitya, xuba inyama, kunye ne-yolk yeqanda eli-1, isonka, itswele, ijinja kunye nekhaphetshu. Siguqa de kube izithako zixutywe kakuhle.
Ngoncedo lwecephe, sibeka amacephe amabini omxube wenyama entendeni yesandla kwaye senze ibhola yenyama. Siyidlulisa ngomgubo kwaye siyityumze ngezandla zethu de sifumane uhlobo lwehubhuger ebhabha.
Siyaphinda esi senzo de kugqitywe ubunzima benyama.
Sitshiza i-steaks zaseRussia epanini yokupanda ngeoyile eninzi. Kuqala si-brown icala elinye, liphethule, ligaxe ifillet kancinci ngoncedo lwe-spatula ukukhupha iijusi kwaye ulinde ukuba limdaka kwelinye icala.
Susa emlilweni kwaye uvumele ukuphumla kwiphepha lekhitshi lokufunxa.
I-Peel kwaye usike ii-shallots
Siyahlamba kwaye sisike ipepile
Sitshisa iipunipoons ezimbini zeoyile yomnquma epanini. Yongeza ii-shallots ezinqunqiweyo kwaye uziyeke zibile.
Nje ukuba uzingelwe, yongeza ipepile kwaye uyiyeke ichaphazele.
Xa ipepile kunye netswele zithambile, yongeza itoti yetumato etyumkileyo, itispuni yetyuwa, iswekile ezimbini kwaye mayenze i "chofchof" imizuzu emi-5-8.
Sisusa emlilweni kwaye sihamba nge-turmix.
Kwipani enye apho senze khona isosi, sibeka iiflethi zaseRussia kwaye sithulule isosi ngaphezulu. Ukulungele ukukhonza (okanye ukugcina kwi-tupperware).
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka kwenyama » I-Russian steaks «atomataos»